DEG DEG:- Ciidanka dowladda oo goordhaw soo afjaray weerarkii maqaayadda Pizza House – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
DEG DEG:- Ciidanka dowladda oo goordhaw soo afjaray weerarkii maqaayadda Pizza House
Ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee loo yaqaano Gaashaan ayaa daqiiqado kahor soo afjaray weerarkii ay dagaalayahanadda Al-shabaab kusoo qaadeen Hoteelka Posh Treats iyo maqaayadda Pizza House ee ku yaalla isgoyska Zoobe ee degmada Hodon ee magaalada Muqdisho.
Weerarkaasi oo bilawday xalay saacada markii ay ahayd 8.30pm habeenimo ayaa la xaqiijiyay inay ku geeriyootay ku dhawaad 20 qof, iyadoona 30 qof kale ay ku dhaawacantay, sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiisha dowladda federaalka Soomaaliya oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay.
Dagaalyahanada Al-shabaab ayaa weerarkoodii xalay ku bilaabay qarax ay u adeegsadeen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay, kaas oo ay ku dhufteen afaafka hore ee Hoteel Posh Treats ee degmada Hodon.
Qaraxa kadib waxay dagaalyahanadda Al-shabaab gudaha galeen hoteelka Posh Treats iyo maqaayadda Pizza House oo labadooda iska soo horjeeda.
Ciidamada Gaashaan ayaa la sheegayaa inay xilligaasi ku guuleysteen inay dilaan mid ka mid ah dableydii weerarka soo qaaday.
Sarkaal ka tirsan ciidanka NISA oo warbaahinta Bulshoweyn si hoose ula hadlay ayaa u xaqiijiyay in la dilay dhammaan dableydii weerarka soo qaaday, islamarkaana ay haatan goobtaasi ku sugan yihiin ciidamada dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa sida gaarka ah u tababaran ee Gaashaan.
Dhinaca kale, maqaayadda Pizza House ayaa haatan waxaa laga soo saarayaa meydadka dadkii shacabka ah oo ay dagaalyahanadda Al-shabaab dileen.
Dableydii weerarka ku qaaday Hoteelka Posh Treats iyo maqaayadda Pizza House ayaa la sheegayaa inay ahaayeen illaa 6 nin, sida ay inoo xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan ciidamada nabad-sugidda qaranka, waxaana saacadaha soo socdo meydkooda loo soo bandhigi doonnaa saxaafadda.